यौन सम्पर्क गर्नुअघि पुरूषले यी ४ कुरामा ध्यान दिनुहोस ! – Sagarmatha Online News Portal
यौन सम्पर्क गर्नुअघि पुरूषले यी ४ कुरामा ध्यान दिनुहोस !
एजेन्सी । यौन सम्पर्कका बारेमा महिला पुरुष दुबै धेरैभन्दा धेरै कुराहरु जान्न चाहान्छन् । तर उनीहरु कुरा गर्न लजाउँछन् । सुखद दापत्य जीवनको कल्पना गर्न चाहानुहुन्छ भने र परिवारमा आपसी सझदारी बढाउन चाहानुहुन्छ भने यस्ता कुराहरु श्रीमान र श्रीमतीबिच हुनुपर्छ ।
बेडमा भएको बेला मानिसहरु सेक्स गर्न आतुर हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा पुरुषले महिला र महिलाले एक अर्कालाई कसरी सुखानुभुत गराउन सकिन्छ त्यसबारे उनीहरुले एकअर्कालाई बुझ्नुपर्छ । युवतीहरुसँग सुमधुर यौन सम्पर्क गर्नु छ भने यी कुराहरुमा ध्यान दिनुहोस ।
३. सेक्स गरिसकेपछि नाङगै सुत्नु उचित हुन्छ । यदि सेक्सपछि सफा गर्ने काम गरिएन भने त्यसले पछि समस्या ल्याउने अध्ययनले देखाएको छ । यदी तपाईको यौनअंगबाट गनाउने बासनाहरु आएको छ भने तुरुन्त डाक्टरको परामर्श लिनुहोस् ।
Published On: २० जेष्ठ २०७६, सोमबार